Kuzokhulekelwa izingozi zomgwaqo eVulindlela | News24
Kuzokhulekelwa izingozi zomgwaqo eVulindlela
UKUNYUKA kwezinga lezingozi ezenzeka emgwaqeni ezindaweni ezingaphansi kukaVulindlela sekwenze ukuba umphakathi uhlanganise uhlelo lomkhuleko wokukhulekela lezi zingozi.
Lo mkhuleko uhlelwe inhlangano engenzi nzuzo i-Vuliway Youth Club ephinde ibe yingxenye yekhasi e-Ezase-Top ezinkundleni zokuxhumana uFacebook. Umkhuleko wethiwe ngokuthi ‘Sekwanele Baba Prayer’ uzoba mhla zingama-28 kuLwezi (November) ehholo lakaGezubuso ngehora leshumi (10am) ekuseni.
Lo mkhuleko uzoba ngempelasonto njengoba kusanda kuba khona inhlekelele yengozi endaweni yakaMnyandu nalapho kushone khona abantu abayisihlanu.
Le ngozi ibibandakanya iloli kanye neveni ebelilayishe abantu. Abantu abashonile kubalwa khona nengane eneminyaka emithathu.
Iveni kuthiwa belilayishe abantu abali-10 kanti bebephuma emcimbini womndeni obuse Emthunzini ngesikhathi kwenzeka le ngozi.
UNks Lungi Cele nongomunye wabahleli balo mkhuleko ngaphansi kwenhlangano i-Vuliway Youth Club uthe lena ngenye yezindlela abazama ngayo ukulwisana nezinga lezingozi eliphezulu kakhulu endaweni yakaVulindlela.
Ngaphandle kwezingozi uthe bazobe bekhulekela nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye nezinga eliphezulu lokungasebenzi kwentsha.
UNks Cele uthe kuzona zonke lezi zinto abazobe bezikhulekela inkinga yezingozi iyona ehamba phambili.
“Sesikhathele izingozi ezenzeka njalo kulezi zindawo zidlule nemiphefumulo yabantu. Okubuhlungu kakhulu ukuthi lezi zingozi zenzeka ezindaweni ezizodwa.
“Sibone sekuyisikhathi sokuthi nathi sisukume sicele uMvelingqangi ukuba naye engenelele ngoba sekungaphezu kwamandla ethu manje asisazi ukuthi kumele senze njani,” kubeka yena.
UNks Cele uthe izindawo ezijwayele ukuba nezingozi ikaMnyandu, ebhulohweni eTaylors kanye nasebhulohweni laseMzamweni.
“Ayipheli inyanga ingenzekanga ingozi kweyodwa yalezi zindawo sikhathele ukulahlekelwa imiphefumulo nokulinyalelwa abantu. Sifuna kuke kuhlanganwe kukhulekwe ku phinde kubhungwe ukuthi yini engasiza ukugwema lezi zingozi ukuba zinciphe okanye ziphele qobo zingasenzeki,”kuchaza yena.
Kunxuswa umphakathi ukuba uphume ngobuningi bawo uzokhulekela lesi sihlava kanti futhi uyanxuswa ukuba ufake izivatho zasemandleni awo. Akukhethile ukuthi uhlala kuyiphi indawo noma ubani wamukelekile ukuba indlenye yalomkhuleko.
“Ayipheli inyanga ingenzekanga ingozi kweyodwa yalezi zindawo sikhathele ukulahlekelwa imiphefumulo nokulinyalelwa abantu.
Sifuna kuke kuhlanganwe kukhulekwe ku phinde kubhungwe ukuthi yini engasiza ukugwema lezi zingozi ukuba zinciphe okanye ziphele qobo zingasenzeki.”